Kabaha - Ragga Qaabka Leh | Ragga leh Qaabka (Bogga 2)
Raadi wax walba oo ku saabsan rootiga ragga. Faa'iidooyinkiisa, qaababka kala duwan, qalabka tixraaca iyo sida saxda loogu helo marka la isku daro.
La kulan seddex ka mid ah waxyaabaha ugu fiican uguna qurxoon ee sharaabaadyada iyo kabaha la sameysan karo maanta. Labadaba caqli iyo iska caadi.
Sneakers loogu talagalay isboortiga, noocyada ugu fiican
Ninka maanta wuxuu qaataa xirfado kala duwan oo isboorti ah si uu u hagaajiyo jirkiisa, u maaweeliyo una wanaajiyo caafimaadkiisa. Sidaa darteed, waa muhiim inaad iibsato kabo wanaagsan oo loogu talagalay cayaaraha.
Kabaha ugu fiican ee isboorti ee ka soo ururinta deyrta / jiilaalka 2018-2019
Baro kabaha isboorti ee ugu fiican ee lagu arkay dayrta / qaboobaha 2018-2019 aruurinta lagu soo bandhigay London, Milan iyo Paris.
Afar qaab oo loo xidho kabo adag oo Derby ah
Kabaha adag ee Derby waxay noqon doonaan isbeddel sannadka 2018. Waa kuwan afarta dariiqo ee ugu wanaagsan ee la isugu dari karo.
Noocyada kabaha ee dharkaaga
Haddii aad rabto inaad dejiso isbeddel ku yimaada adduunka wanaagsan ee moodada, xulashada nooca kabaha ee dharkaaga ayaa u baahan dadaal iyo dhadhan fiican.
Dufcadda cusub ee kabaha kabaha qaboojiska ah ayaa halkan jooga
Baro wararka ugu dambeeya ee kabaha isboortiga ee ka hortagga qabow xilliga qaboobaha. Isbeddel ku soo aroora silhouettes adag iyo ruuxi dib u noqda.
Saddexda ikhtiyaar ee kabaha ee surwaalkaaga xamuulka ah
Baro ikhtiyaaraadka kabaha ee sida ugu fiican ugu shaqeeya surwaalka xamuulka berrinka, magaalada, iyo xafiiska.
Afar qalad caadi ah oo kabaha jiilaalka (iyo sida loo saxo)
Wax ka baro khaladaadka kabaha ee ugu caansan xilliga jiilaalka, iyo sidoo kale sida loo daaweeyo si ay qaab ahaan iyo jir ahaanba diyaar ugu noqdaan qabowga.
Kabaha dhogorta leh ee dhogorta leh oo cagahaaga diirin doona xilliga qaboobaha
Soo ogow kabaha ugu fiican ee dhogorta leh xilliga dayrta / jiilaalka. Kabo xilli ciyaareedkan ku yimaada noocyo badan oo kala duwan.
Waxaan ogaaneynaa qaababka kala duwan ee kabaha Brogue. Intaa waxaa dheer, waxaan kuu soo bandhigeynaa fikrado si aad u gaarto isku-dhafnaan heer sare ah.
Waxaan u soo jeedineynaa sagaal buudh shaqo oo ka socda shirkadaha raaxada deyrta / jiilaalka. Waxaan u kala soocnaa qaabab kala duwan oo kaa caawinaya inaad doorato.
Saddex siyaabood oo laysku daro isboortigaaga gadaal dayrta
Kabaha kabaha ee Retro waa isbeddel xilligan dayrta. Halkan waxaan ku siineynaa seddex fikradood oo aad isugu dareyso qaab, labadaba xafiiska iyo wadada.
Kabaha ugu quruxda badan ee ka hortagga qabow
Noocyada moodada ayaa u diyaar garoobay inay ku beddelaan kabo yaryar oo mustaqbal leh iyo kuwa yar yar moodooyinka ka hortagga qabow ee sidan oo kale ah
Ku cusub isboortiga deyrta 2017
Kuwani waa qaar ka mid ah kabaha isboortiga ee la xiran doono xilliga dayrta 2017. Moodooyinka lagu dhiirrigeliyo buur-socodka, orodka caadiga ah iyo 90-meeyadii.
Ma ogtahay in espadrilles ay yihiin isbeddel dhanka ragga ah?
Kabo dhaqameed aan waligood joojin isticmaalkeeda. Waxay yihiin kuwo raaxo leh, shaqeynaya, iskuna dari kara siyaabo badan: waa espadrilles.
Naqshadayaashu waxay oggolaadeen ka bixitaanka foorarka-dariiqyada waddada
Naqshadeeyayaasha iyo saamileeyaashu waxay oggolaadeen ka bixitaanka flip-flops. Kabo raaxo leh oo qabow oo leh fursado isku dhafan oo ka badan inta ay u muuqato.
Kabaha ugu quruxda badan ee xagaaga xagaaga
Waxaan kuu soo qaadaneynaa isbeddelladii ugu dambeeyay ee kabaha dharka, laga soo bilaabo Vans Old Skool illaa monochrome DC Trase TX ilaa All Star.
Kabaha isku-dhejiska ah, kabaha aan caadiga ahayn ee xiiraya xagaagan
Waxaan kuu soo qaadaneynaa kabaha ugu fiican ee isku-dhejiska ragga xagaagan. Moodooyinka cad ama taabashada xiisaha leh ee muuqaalkaaga caadiga ah.
Tilmaamo si aad ugu ilaaliso kabaha xaalad qumman
Aad ayey muhiim u tahay in si sax ah loo doorto kabaha ragga, maadaama ay ka mid tahay shakhsiyadda iyo sawirka aan u gudbinno dadka kale.
Shan nooc oo kabo xagaaga ah ayaad ku xidhan kartaa jiinis
Waxaan kuu soo bandhigeynaa shan fikradood oo kabo xagaaga ah oo si weyn ugu shaqeynaya joonisaska si muuqaalkaaga caadiga ahi u cusub yahay sida ay u qurux badan yihiin.
Shan espardeñas ayaa diyaar u ah magaalada
Espardeñas waxay la xiriirtaa ciidaha, laakiin maalmahan waxaa la soo saaray moodallo aan iskudhac ugu yaraan magaalada ka dhicin.
Tababarayaasha si ay u kabaan dharkaaga guga
Waxaan ku tusineynaa 13 nooc oo kabo isboorti ah oo ku habboon xilliga gu’ga-xagaaga 2017. Keebaad doorbidaysaa xilligan?
Sidee loo siiyaa kabahaaga dharka cad ee muuqaalka guga
Waxaan kuu sharaxeynaa sida loo nadiifiyo dhamaan qeybaha kabahaaga dharka cad si ay ugu dhawaadaan sida ugu macquulsan muuqaalkooda asalka ah.
Sida loo xirto kabahaaga kabaha leh qaab
Waxaan ka hadleynaa xulashooyinka ugu quruxda badan ee ay tahay inaad isku darto kabahaaga, labadaba qaybta sare iyo hoose.
Maanta waa inaan ka hadalnaa seddex moodel oo ah kabo isboorti oo midabyo madow iyo caddaan ah, moodooyinka qaar oo wax walba la shaqeeya.
Si aad u nadiifiso kabaha ama kabaha isboortiga, waa inaad raacdaa talooyin taxane ah haddii aad rabto inay dhalaalaan sida maalinta koowaad
Saddex tababarayaal midab-buuxa oo asal ah si ay ugu guuleystaan ​​guga
Ma ka walwashay kabahaaga isboortiga Ha ka walwalin maxaa yeelay haddii aad ka daashay xirashada kabaha noocyada caadiga ah ee dhexdhexaadka ah iyo ...
Raadi nooca kabaha ee kuugu fiican adiga
Waxaan ka hadleynaa noocyada kala duwan ee kabaha oo waxaan ku wehelinaa muuqaal muhiim ah si ay kaaga caawiyaan inaad doorato kuwa ugu habboon qaabkaaga.
Laba-cod. Xilligan waxaan isku dhiibeynaa kabaha midabada midabka leh
On catwalk waxaan ku aragnay iyaga oo ku jira bandhigyo moodooyin ah sida Prada, Salvatore Ferragamo ama Louis Vuitton. Haatanna waa diyaar ...
Vans-ku wuxuu dib-u-tarjumayaa moodeliyadeeda ugu halyeeyga leh dharka Talyaaniga ee qiimaha leh
Gawaarida yar-yar ee Vans-ka oo leh dhar Talyaani ah
Siddeedda kabo ee mustaqbalka wanaagsan
Ma waxaad raadineysaa kabo isboorti mustaqbal leh oo aad ku siiso taabasho cusub muuqaalkaaga caadiga ah? Moodooyinkaani waa sideed ugu fiican.
Waa waqtigii sandal: waxaan ku tusaynaa 6 moodel oo 'qabow' ah xagaagan 2016
Ururinta Vans x Nintendo oo muddo dheer la sugayay ayaa la iibinayaa
Hadaad caruur aheyd 90-maadkii, waxaad jeclaan doontaa ururinta nostalgic Vans x Nintendo, oo ay kujiraan kabaha isboortiga, dharka iyo qalabka leh astaamahooda iyo astaamahooda.
Kabaha cusub ee H&M ee xagaaga waxay ku saleysan yihiin khadadka caadiga ah waxayna la imaanayaan denim iyo linen as the protagonists main.
Qalabka loo yaqaan 'espadrilles' casriga ah wuxuu ilaaliyaa raaxada iyo inta badan farshaxanimadooda, laakiin wuxuu ku badiyaa cimri dhererkooda cagaha caagga ah.
Waxaan kuu keenaynaa noocyada ugu fiican ee kabaha si aad u qurux badan dayrtaan labadaba xafiiska iyo inaad cabto ka dib shaqada.
Madow iyo caddaan: toddobada moodel ee Nike ee dejiya isbeddellada
Sneakers ugu sareysa ee lagu soo bandhigo isku-darka midabka guud ee adduunka oo dhan: madow iyo caddaan. Nike
Talooyin ku saabsan xirashada kabaha Dhakhtarka Martens
Waxaan kuu sharaxeynaa siyaabaha kala duwan ee loo xirto kabaha Dhakhtarka Martens marka la eego surwaalka iyo sharaabaadyada.
Ma waxaad ka baqeysaa inaadan aqoon sida loo isku daro kabaha Dhakhtarka Martens iyo surwaalkaaga? Halkan waxaan ku tusineynaa sida loogu xiro surwaal toosan ama caato ah.
Kabo laba-midab leh: kabaha xiddiga ee xilli ciyaareedka
Kabaha ugu horreeya ee midab-buluugga ah waxaa sameeyay 1868-kii oo uu sameeyay saynis-yahanka reer England ee John Loob waxaana loo adeegsaday kirikitka. Hadda waxay ku soo noqdeen moodada
Maxaad sugeysaa inaad gashato 'kabaha chelsea'?
Kabaha Chelsea waxay noqdeen dharka dharka lagu xidho. Dukaameysigaan waxaan kusoo bandhigeynaa waxyaabaha aan ugu jecel nahay deyrta-jiilaalka 2013/2014.
Trinomic ururinta kaabsolka cusub ee Puma
1990 Puma waxay soo saartay tikniyoolajiyadda socotey ee loo yaqaan 'Trinomic', oo ka koobneyd nidaamka mesh laba geesoodka ah ee ...
Espadrilles waxaa loogu talagalay xagaaga (I)
Espadrilles waa kabo ku habboon xilliga xagaaga. Raaxo, cusub oo aad u shaqeynaya, espadrilles waa isbeddel buuxa xagaagan
Supra Skytop waxay soo bandhigeysaa qaabkeeda ugu casrisan ee Skytop III oo ku imaaneysa dhamaan dusha casaanka wejiga hore ...
Prada Levitate Wingtip, kabahaaga isku dhafan
Xilligaan Dayrta-Jiilaalka ee soo socda 2012-2013, Prada wuxuu soo bandhigayaa isugeyn cusub oo udhaxeysa kabaha isboortiga iyo espadrilles oo leh qaabkeeda 'Levitate Wingtip' Wax cusub ...
Kabo midab leh, 10-kayga ugu cadcad ee Dayrta-Jiilaalkan 2012-2013
Waa maxay isbeddellada aan cagaheenna ku arki doonno Deyrta-Jiilaal 2012-2013 ee soo socota? Shaki la'aan, mid ka mid ah isbeddellada boqorka ayaa noqon doona kabo ...
Balance-ka Cusub wuxuu soo bandhigayaa qaabkiisa cusub ee kabaha dayrta soo socota ee 2012, oo ah nooca 'ML574'. Maxaan ka arki karnaa ...
Kabaha Nautical iyo rootida roobaadka xilliga xagaaga / xagaaga laga bilaabo Zara
Soo-jeedinnada badda iyo moccasins ee ka imanaya Zara xilliga gu'ga / xagaaga
Sidee loo xirtaa Jiinis?
Sida loo xirto jiinis
Noocyada qolalka beddelaadda
Noocyada dharka, noocyada dharka, laga soo bilaabo tan rasmiga ah iyo tan aan rasmiga ahayn.
10.000 oo doolar (ama 7.350 euro) qaasatan waa waxa kabahan shirkada Fransiiska ah ee loo yaqaan 'Louis Vuitton' ay qiimo leeyihiin, waan kari waayey ...
Kabaha Gladiator ee ragga
Waxaan had iyo jeer ka hadalnaa moodada laakiin waxaan tixgelineynaa xilliga aan ku nool nahay. Maanta waxaan dejin doonnaa qaabka oo aan ka hadlaynaa ...
Las Yayas iyo espadrilles nacaybkooda
Sababta Waa maxay sababta xagaaga kale ee espadrilles nacaladu isku dayaan inay mar labaad noqdaan kuwo moodada? Waa wax aanan fahmin…
Haddii aad rabto inaad dareento sida naqshadeeye maalin, ama aad rabto inaad hesho labadaas kabo ee aad had iyo jeer ku riyoon jirtay laakiin maya ...
Ku dheji clones kabaha qoob-ka-ciyaarka Michael Jackson
Qandhada Michael Jackson waxay umuuqataa mid aan xad lahayn. Markay jiraan maalmo kooban illaa bisha aad ...
Louis Vuitton kabaha kabaha ragga
Kabaha kabaha ee ragga loogu talagalay oo aan hoos ku soo bandhigi doono waxaa iska leh shirkadda Faransiiska ee Louis Vuitton waana ...